Juunyo | 2008 | WEEJIDOW
Archive for Juunyo, 2008
War Deg Deg ah: Gaalkacyo: Nabaddoon Xalay lagu dilay Gaalkacyo & warbixin ammaanka kusaabsan.
Juunyo 30, 2008
Koox dhallinyaro ah oo aan la garanayn ayaa xalay dil toogasho ah u gaystay masuul nabadda u ololayn jiray oo dadka Gaalkacyo deggeni ay aad u yaqaaneen.
Allaha u naxariistee Yaasiin Cali Barre ( Fintilig) ,waxaa dilay niman wajiyadu uxiran yihiin waxaana lugu dilay isagoo joogey goob Shaaha laga cabo oo uu leeyahay wiil uudhalay ,mana jirin cid qabatey dadkii dilay.
Falkan wuxuu kusoo beegmayaa xilli ammaanka Gaalkacyo uu muuuqdo mid aad u qasan , dilalka shirqoolanna ay aad ugu badan yihiin.
Tan & wixii ka dambeeyey dhamaadkii 2007-dii ilaa iyo waqtigan gobalka Mudug wuxuu ka mid yahay gobalada Puntland ee ay ka dhacayeen falal amaan daro ee baahsan ,waxaana socda dadaalo badan oo ay wadeen Isimada & Waxgaradka gobalka oo aan wali waxba ka soo bixin.
Gobalkan Mudug wuxuu ka mid ahaa gobalada dalka Soomaaliyeed ee ay wada dagaan beelo Soomaaliyeed ,waxaana beelaha gobalka wada dagen uyaala Sharci kala qeexaya sida ay udhacayaan ,waxa ayna dhamaanba ka heshiiyeen dagaaladii adkaa ee dhexmaray & joojinta dilalka kala duwan ee Qabaa’ilka ku saabsanaa.
Bilihii ugu dambeeyey waxaa gobalka Mudug ka taagnaa falal amaan daro ,waxa ayna dad badan ka walaacsan yihiin dilalka & dhaca ka taagan Magaaladii Gaalkacyo ee xarunta gobalka Mudug ,waxaana socda falal umuuqda kuwa ay Siyaasad ka dambeyso luguna dilayo cid walba oo loo arko ka shaqeynta danta Umada Soomaaliyeed.
Bishan June gudaheeda Magaalada Gaalkacyo waxaa lugu dilay dad badan ,inkastoo aan la heyn tiro koob rasmi ah hadana goobaha caafimaadka ayaa ku sheegay tirada dhimashada bishan gudaheeda 10 in ka badan.
Dadkan qaarkood waxaa lugu dilay Qaraxyo & Bistoolado lamana yaqaan cidii dishey ,waxa ayna dadku ku sheegayaan cidii dishey niman Madaxyada xiran ,inkastoo ay dad badan shakiweyn ka qabaan Madax Duuban.
Labadii todobaad ee ugu dambeysay waxaa lugu dilay Magaalada Gaalkacyo dad caan ka ahaa oo nabadda ka shaqeyn jirey ,cidii dilkooda ka dambeyseyna cid ilaa hada shaacisay ma jirto marka laga reebo shakiga ay dad badan wada qabaan.
Maalmo kooban ka hor qarax weyn ayaa lala beegsaday Nabadoon (kawarqabe) oo ka mid ahaa Nabadoonada gobalka Mudug ,isna cidna ma sheegan dilkiisa lugumana sameyn wax baaritaan ah oo Saxaafada loo sheegay.
Dilalkaasi & Qaraxyadu waxa ay noqdaan wax caadi ah ,waxaan jirin marnaba cid loo qabtey dilalkaasi oo dhamaantood ahaa kuwa isku xiran oo silsilad umuuqda ,waxa ayna dadka Magaaladu uga hadlayaan Siyaabo kala duwan.
Dadka ugu badan waxaa loo tirinayaa in ay dilalkan geysanayaan Kooxo diidan nabadgalyada Soomaaliya ,gaar ahaan gobalka Mudug kuwasoo Mashaariic lacageed ay unoqotey dilalka dadka aan waxba geysan.
Qaar kale oo dadweynaha ka mid ah falalkaan waxa ay ku sheegayaan kuwa ay Siyaasad ka dambeysay ayna wadaan Kooxaha diidan dawladda Faderaalka ee Soomaaliya & Joogitaanka ciidanka Itoobiya ,balse taasi waxa ay su’aal lid ku ah imaaneysa marka la dilay dad aan siyaasad shuqul ku laheyn.
Maamulka Puntland ee gobalkan Jooga noocuudoono ah noqdee ma jirin wax talaabo oo ay qaadeen ,marka laga reebo Kulamo la qabtey & Isku baaraarujin wax ka qabashada amaanka ee gobalka Mudug.
Isimada Gobalka & Waxgaradka ayaa qaatey tub ay wax uga qabanayaan xaaladan amaan daro ee ka taagan gobalka Mudug & falalkaan aan horey looga aqoon Magaalada Gaalkacyo & guud ahaan Puntland waxaana kulamadii ugu horeeyey looga dhawaaqey gudiyo ka kooban Waxgaradka ,Culumada ,Aqoonyahanada & Ganacsatada waxa ayna wada shaqeyn toos ah la yeelan doonaan golaha Isimada ee gobalka Mudug & Maamulka gobalka Mudug.
Al-Shabaab oo sheegay in madaxa UNHCR u afduuban yahay Yuusuf Indhacadde
Saraakiisha dhinaca siyaasadda ee Al-Shabaab ayaa markii ugu horeysay dhambaal ay soo gaarsiiyeen Warqabadka Waagacusub waxay ku beeniyeen ku lug lahaanshaha afduubka lagu heysto madaxa Hay”ada UNHCR Maxamed Xasan Cali (Keynaan).
“In la iska been sheega maaha,waxaana shaqaalaha UNHCR ogyihiin in Maxamed Xasan Cali (Keynaan) afduubtay Yusuf Indhacadde oo aan la ogayn ujeedka uu ka leeyahay,shaqana kuma lihin ee xisaabtanka hoowshaas waa mid ku riixan Isbaheysiga dib Xoreynta iyo Yuusuf Indhacadde””ayaa lagu yiri dhambaal ka soo baxay mid ka mida madaxda Al-Shabaab.
Ila wareedyo ku sugan Muqdisho ayaa Waagacusub u sheegay in Samafale Keynaan ku afduuban yahay Suuqa Xoolaha ayna heystaan qaar ka mida Maleeshiyadda Yuusuf Indhacadde.
Si kastaba ha ahaatee,hadalkaan ku wajahan Yusuf Indhacadde wuxuu ka dhigan yahay mid siyaasadiisa arrimaha Soomaaliya gelinayo mugdi mar hadii uu ku lug yeesho afduubyada lagu barakicinaayo samafalayaasha dadka dhibaateeysan ee Soomaaliyeed.
Asmara – Golaha dhexe ee Isbaheysiga dib u xoreynta oo shan qodob soo bandhigay
Shir ay xubnaha golaha dhexe ee Isbaheysiga dib u xoreynta ku yeesheen Xarunta Haashimi ee Magaaladda Casmara uuna gudoominayay ku simaha gudoomiyaha golaha dhexe ahna Gudoomiye ku xigeenka golaha dhexe Injineer Xuseen Maxamed Ceydiid ayaa laga soo saaray shan qodob oo ay u bandhigayaan golaha fulinta si loo meelmariyo loogana doodo.
Qodobada ka soo baxay shirka uu gudoominayay Xuseen Maxamed Ceydiid ayaa u qoran sidaan:-
1-Warbixinta labada gole:-A-dhageysiga iyo ka doodida Warbixinta maamulka labada gole ee Isbaheysiga,B-Maxaa qabsoomay?,C- maxaan qabsoomin,sababaha ay u qabsoomi waayeen?
2-Dib u eegista shirkii Jabuuti:- A-sida dhibaatooyinkii ka dhashay heshiis ku sheegii Jabuuti iyo Nairobi, B- go-aan ka gaarista hogaanka Isbaheysiga ARS ,C-sharci marinta hogaankii hore ee Isbaheysiga ARS!!
3-Dib u eegista xeerka Isbaheysiga ,A-dhisida gudi garsoor iyo ilaalinta xeerka,B- ku darista xeerka Isbaheysiga faqrada Ciqaabta iyo wixii kale oo loo arko inay muhiim yihiin,C-turxaan bixinta iyo dhameystirka qeybaha qoran ee xeerka Isbaheysiga!!
4-Mustaqbalka Isbaheysiga ARS:- A- Ma waxaa uu ahaan doonaa sida uu hada yahay oo ah Isbaheysi,B- Mise wuxuu noqon doonaa urur? C- Mise waxaa jira fikrada kale?
5-Dib u eegida barnaamijka siyaasadeed iyo ujeedooyinkiisa,arrimaha dibadda,arrimaha gudaha iyo xaquuqul insaanka,sida tacadiyada dhacay ee rayidka Soomaaliyeed.
Golaha dhexe waxay kulan kale yeelan doonaan berrito,waxayna labada gole u dabaaldegayaan caawa 1 July oo ka dhigan Midowgii Soomaaliya.
Shirka labada gole ee Casmara ka dhacay waxaa ka qeybgalay wafdiyo ay kala hogaaminayaan Dr Cumar Iimaan Abuubakar iyo Sheekh Cabdulahi Xaashi oo ay hore garabka Jabuuti u sheegteen inay ka mid yihiin.
Labada Shariif waxaa si rasmiya xilka qaadis loogu sameeynayaa 3 July 2008 sida ay Waagacusub u xaqiijiyeen xubnaha labada gole ee Casmara ku sugan,waxaana sidoo kale isla maalintaas la dooran doonaa gudoon cusub oo Isbaheysiga dib u xoreynta yeesho.
3 July waxay huwan tahay dareen culus oo la aaminsan yahay inuu weji cusub u furayo hogaankii hore ee Isbaheysiga dib u xoreynta Soomaaliya iyo xubnaha golayaasha Casmara oo ku guuleeystay inay Casmara isugu geeyaan tiradii codka aqlabiyada waloow garabka labada Shariif ay ku tilmaameen xubno lacag lagu iibiyay.
Socdaalka Sheekh Cumar IImaan iyo Sheekh Cabdulahi Cali Xaashi ku joogaan Casmara ee ay kaga qeybgalayaan mooshinada xilalka looga qaadaayo waxay ka dhigan tahay falaar ku taagan halboowlaha garabka Jabuuti oo hore u tirsanayay labadaas xubnood oo midkood uu noqon karo mid lagu bedelo booskii Shariif Sheekh Axmed.
Warar hoosaadyada waxay sheegayaan in Xilkii Shariif Xasan loo caleema saaro Xuseen Maxamed Ceydiid halka xilka Shariif Sheekh Axmed loo ololeeynayo Cumar Iimaan Abuubakar,waloow ay jirto xan kale oo tilmaameysa in Xasan Dahir Aweys u xusul duubaayo.
Baydhabo: Baarlamaanka soomaaliya oo ka soo horjeestay Magacaabistii Madaxweynaha uu magacaabay Degmooyin ka tirsan Mudug iyo Galgaduud.
Baydhabo: Xildhibaanadani ka tirsan baarlamaanka KMG soomaaliya ayaa qaar kood waxa ay ka soo horjeesteen degmooyinkii shalay uu madaxweynaha dowladda KMG soomaaliya C/llaahi Yuusuf Axmed Dikreeto ka soo baxday xafiiskiisa lagu kordhayay gobolada mudug iyo Galgaduud.
Mudanayaashani magaalada Baydhabo ku sugan ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay hadalkii shalay madaxweyne Yuusuf Ka soo yeeray, taasi oo ku aadaneed Dikreeto ka soo baxday xafiiskiisa oo ku kordhayay gobolada Mudug iyo Galgaduud ilaa iyo Lix degmo oo horay deegaano u ahaayeen.
Xildhibaanadani maanta sida kulul u cambaareeyay waxaa ka mid ah xillibaan Axmed Cabdi Cumar Burule ayaa sheegay in madaxweynaha aaneey xaq u laheen inuu dalka soomaaliya uu ku kordhiyo gobolo ama degmooyin kale oo hor leh.
Waxay intaasi ku dareen Xildhibaanadani ka tirsan baarlamaanka soomaaliya in looga baahnaa in la soo wargaliyo xillibaanada baarlamaanka soomaaliya, hasa yeeshee waxay nasiib daro ay ku tilmaameen in talaabo baarlamaanka soomaaliya aan ogeyn uu qaado Madaxweyne C/llaahi Yuusuf Axmed.
War Deg Deg ah: Guddoomiye ku xigeenka dhinaca maaliyada ee degmada Afgooye oo goor dhaw gudaha Suuqa Bakaaraha lagu Toogtay
Kooxo hubeysan ayaa goor dhaw gudaha Suuqa bakaaraha waxa ay ku dileen Guddoomiye ku xigeenka dhinaca maaliyada ee degmada Afgooye siyaad oorow xili uu marayay gudaha Suuqa Bakaraha bakaaraha iyadoo aan la ogeyn ujeeda loo dilay Mas’uulkaasi.
Kooxaha dilka geystay ayaa la sheegay in ay ku hubeysnaayeen bisatoolad , waxaana kooxaha dilka geystay ay isaga tageen goobta ay ku dileen Mas’uulkaan.
Mas’uulkaan ka tirsan Gobolka Sh/Hoose ayaa goobta lagu dilay waxaa ka qaaday dad aqoon saday meydkiisa,waxaana xabada uga tiilay madaxa.
Ma aha markii ugu horeysay oo dad rayid ah lagu dilo gudaha Suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho iyadoo Suuqa Bakaaraha dowr jeer lagu dilay dad rayid ah oo aan la garan ujeeda loo dilay dadkaasi, iyadoo aysan jirin hadal ka soo baxay maamulak Gobolka Sh/Hoose oo ku aadan dilka maanta loo geystay Guddoomiye ku xigeenka dhinaca maaliya ee Gobolka Sh/hoose.
War Deg Deg ah: Dagaal Culus oo Caawa ka dhacay Magaalada Guri-Ceel ee Gobolka gal gaduud.
Wararka naga soo gaarayo magaalada Guri Ceel ee gobolka Gal gaduud ayaa waxa ay sheegayaan in Caawa uu ka dhacay dagaal laysku adeegsaday hubka nuucyadiisa kala duwan.
Dagaalkaan oo dhaxmaray Ciidamada Ethiopia ee fariisinka ku leh duleedka magaalada guri ceel ee Gobolka Gal gaduud iyadoo aan la ogeyn qasaaraha soo gaaray dhinacyadii dagaalamay, waxaana dagaalkaan uu noqonayaa habeenkii sedaxaad uu ka dhaco dagaal.
Qaar ka mid ah dadka deegaanka ee fara ku tiriska ah ayaa idaacada Waajidpress waxa ay u sheegeen in caawa ay Weerar ku qaadeen xoogaga ka soo horjeeda joogitaanka Ciidamada Ethiopia iyo siyaasada dowlada KMG islamarkaana aan la ogeyn qasaaraha soo gaaray dhinacyadii dagaalamay.
Dagaalka Caawa ka dhacay duleedka Magaalada guri Ceel ee Gobolka Gal gaduud ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xili maanta Ciidamada Ethiopia ay magaalada ku dileen ilaa laba qof oo rayid ah dhaawacna uu soo gaaray mid kale.
Mas’uuliyiin ka tirsan Baarlamaanka DKG oo sheegay in ay baarayaan dhibaatada loo geystay Shacabka Soomaaliyeed.
Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlada KMG ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in ay barayaan cidii geystay dhibaatada ka jirta Soomaaliya.
Guddoomiyaha gudiga baarlamaanka Soomaaliya u qaabilsan dhinaca warfaafinta Xildhibaan Cawid Axmed Cashara oo u waramayay idaacada Waajidpress ayaa waxa uu sheegay in ay baaraayaan dhibaatadii loo geystay Shacabka Soomaaliya iyo cida Mas’uuliyadaasi leh, waxaana xildhibaanka uu sheegay in ay diyaariyeen gudi baaraya dhibaatooyinka ka jira Soomaaliya isagoo intaasi ku daray in xubanahaas ay isuga jira amaanka iyo xuquuqul insaanka.
Cawid Axmed Cashara oo ah Guddoomiyaha gudiga baarlamaanka u qabilsan dhinaca warfaafinta ayaa tilmaamay dhibaatada loo geysanayo Shacabka ay baarayaan hadii dowlada KMG iyo Ciidamada Ethiopia ku cadaato dhibaatada ka jirta Soomaaliya ay talaabo ka qaadi doonaan sida uu hadalka u dhigay.
Hadalkaan ka soo baxay xildhibaan Cawid Axmed ayaa waxa ay ku soo beegmayaa xili Ciidamada Ethiopia ay duqeyn u geysteen magaalada Guri Ceel ee Gobolka Gal gaduud taasina ay Sababtay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad rayid ah.
Isbaheysiga Asmara oo shir ay maanta yeesheen ku iclaamiyey kulan dhici doono Sedexda Julaay
Shir ay isugu yimaadeen xubnaha labada gole ee Isbahaysiga Dib-U-Xoreynta Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay xaafiiska Isbahaysiga ee Magaalada Casmara.
Shirkani oo uu shir gudoominayay ku simaha gudoomiyaha Isbahysiga DR.Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi waxaana looga hadlayay u diyaargarowga shirka la filayo in uu dhaco 03/07/2008 kana dhaco xarunta Isbahysiga ee Magaalada Casmara.
Waxaana ugu horeyn halkaa ka warbixiyay Gudoomiyaha Guddiga qabanqaabada Sh.Xasan Mahdi isagoo ka warbixiyay halka ay marayso diyaarinta shirka iyo dastuurka taas oo uu sheegay in ay soo dhameeyeen howshooda waxa uuna Gudoomiya amaan u soo jeediyay gudiyadii la shaqaynayay.
Sidoo kale waxaan wax ka waydiinay halka ay marayso qabanqaabada loogu diyaar garoobayo qabsoomida shirkaasi Ku simaha Gudoomiyaha Guddiga Warfaafinta Mudane Maxamed Xaashi waxuuna sheegay in dhammaan guddiyada qabanqaabada ee shirka ay soo diyaariyeen dhamaan howlahii laga sugayay, isla markaana uu shirku dhici doono 3/7/08 oo ku aadan maalinta khamiista ah.
Mudane Maxamed Xaashi waxa uu intaa raaciyay inay ku soo qulqulayaan xarunta Isbahaysiga ee Casmara xubno badan oo ka tirsan xubnaha golaha dhexe ee Isbahaysiga xalayna ay soo gaareen xubno uu ka mid yahay Shiiq Cabdulaahi Cali xaashi.
Gunaanadkii shirkaa ayaa waxaa ka hadlay ku simaha Gudoomiyaha Isbahaysiga mudane Zakariye Maxamuud Xaaji asagoo ku amaanay shaqadii ay soo qabteen kuna booriyay inay sii laban laabaan dadaalkooda la xariira qabsoomida shirka.
Madaxda Africa oo shir ugu furmay goobta dalxiiska loo tago ee Sharma-Sheikh ee dalka Masar
Madaxda Africa ayaa maanta iskugu tagaya hool weyn oo kuyaala Magaalada Loo dalxiis tago ee Sharma-Sheikh ee dalka Masar ,waxa ayna halkaasi ku leeyihiin Shir ay uga hadlayaan xaaladaha ay ku sugan yihiin dalalka Africa.
Shirka maanta furmaya waxaa lafilayaa in si gaar ah loogu soo qaado arimaha Soomaaliya & Zimbabwe ,waxaana jooga Saraakiil kala duwan oo ka socota Beesha Caalamka & Qaramada Midowbay ,ayagoo halkaasi ka jeedin doona Warbixino kala duwan.
Arimaha Soomaaliya shirkan ayaa looga hadlayaa doorka Madaxda Africa ee dadaalada Dibu heshiisiinta ee dalka Soomaaliya & sida loogu baahan yahay in uu Midowga Africa qeyb ka qaato wax qabashada dhibaatada ka taagan Soomaaliya.
Madaxweynaha dawladda Soomaaliya Md. C/laahi Yuusuf Axmed oo Soomaaliya ujooga Shirkaasi ayaa lafilayaa in uu halkaasi ka jeediyo Khudbad uu uga hadlayo xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka Soomaaliya & sida ay Africa inteeda badan uga gaabisay waxka qabashada Xaalada Soomaaliya.
Madaxweyne Yuusuf ayaa sidoo kale lafilayaa in uu soo qaado xaalada Dibu heshiisiinta ee Soomaaliya & ciidamo loo diro dalka Soomaaliya ,kuwasoo taageera dawladiisa ,markaasna badala ciidamada dawladda Itoobiya.
Hogaamiyaal badan oo ka socda dalalka Africa oo ay ka mid yihiin Madaxweynaha Kenya ,Madaxweynaha Ugandha & Ra’isal wasaaraha Ethiopia ayaa lafilayaa in ay ka hadlaan xaaladaha Soomaaliya ,ayagoo ka xun sida ay Africa uga gaabisay wax uqabashada dalka ay dagaaladu aafeeyeen ee Soomaaliya.
Shirkan ayaa dhamaadkiisa la filayaa in ay ka soo baxaan go’aamo looga hadlayo xaaladaha Africa oo dhan ,waxaana si gaar ah farta loogu fiiqi doonaa Soomaaliya ,Suudaan & Zimbabwe.
War Deg Deg ah: Laba Wariye oo u dhashay dalka Faransiiska oo ka badbaaday in lagu afduubo Boosaaso
Boosaaso:-War goordhoweyd uu na soo gaarsiiyeey wariyaha Halgan.net ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobalka Bari ayaa sheegaya in 2 saxafi oo u dhashey dalka Faransiiska ay goor dhaweyd ka badbaadey weerar lagu rabay in lagu qafaasho.
Weerarkan ayaa wuxuu ka dhacay agagaaraha Hotel-ka International Village ee magaalada Boosaaso, waxaana soo qaaday ilaa 7 nin oo ku hubeysan hubka fudud waxaase si fiican isaga caabiyey ilaalada labada wariye iyaga oo ku guuleystay in ay is difaacaan.
Waxaa goobta markiiba soo gaaray ciidanka Booliska ee magaalada Boosaaso iyaga oo isku gadaamay agagaar ka Hotel Village,waxaa weerarkan ku dhaawac may mid ka mid ah ilaalada labada wariye ee u dhashay dalka Faransiiska.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Juunyo, 2008.